China ST Series C Frame Single Crank Mechanical Press ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Daya
Isi isiike (nrụrụ) 1/6000.
Jiri OMPI pneumatic akọrọ ipigide na breeki.
The mmịfe adopts abụọ-n'akụkụ isii kwadoro ndu ụzọ, na mmịfe ndu adopts "elu-ugboro hardening" na "okporo ígwè egweri usoro": ala eyi, elu nkenke, ogologo nkenke njide oge, na mma ebu ndụ.
A na-eji crankshaft mee ihe dị ike nke nwere ike dị elu 42CrMo, nke dị okpukpu 1.3 karịa ike ígwè ma nwee ndụ ogologo ndụ.
A na-eji akwa ọla kọpa nke ọla kọpa ZQSn10-1 mee ọla kọpa, onye ike ya dị okpukpu 1.5 karịa nke ọla kọpa BC6 nkịtị.
Ojiji nke ihe nchebe na-ekpo ọkụ nke hydraulic nwere ike chebe ndụ ọrụ nke ọkpọ ma nwụọ.
Standard SMC mgbali inye valvụ, mmanu, ikuku nyo.
Nhọrọ ebu ebu (ikuku ikuku).
Hydraulic bufee nchedo ngwaọrụ
Ngwa ntuziaka mmịfe ntuziaka (n'okpuru ST60)
Electric mmịfe ukpụhọde ngwaọrụ (n'elu ST80)
Agbanwe mgbanwe ọsọ ọsọ moto (ọsọ ọsọ)
Njirimara ebu dị elu (n'okpuru ST60)
Ngosipụta ihe ngosi di elu (n'elu ST80)
Ngwa mmịfe na ebu nha
N'usoro cam njikwa
Crankshaft n'akuku egosi
Njikọ ikuku ikuku
Abụọ-ọdịda ọdịda ngwaọrụ nchekwa
Mechanical shockproof ụkwụ
Echekwabara interface maka ngwaọrụ nchọpụta nnyefe ezighi ezi
Main moto reversing ngwaọrụ
Ngwaọrụ nchekwa nchekwa fotoelectric
Ngwa mmanu mmanu eletriki
Ihuenyo mmetụ (pre-break, pre-load)
Pneumatic ebu na mpe mpe akwa ngwaọrụ
Ngwa anwụ anwụ mgbanwe ngwaọrụ (ịnwụ lifter, anwụ mwekota
Ma ọ bụ ebu gbanwere)
Nkebi akụkụ punching ngwaọrụ nke mmịfe
Nri (ikuku, igwe na NC)
Ebu anwụ ngwaọrụ ọkụ
Mmanụ mmanụ mmanu ngwaọrụ
DAYA ogologo akuku uzo abuo crank punch pịa
Ndị ọzọ kwụ ọtọ n'akụkụ crank presses
Daya pịa: na ikpo okwu na nchekwa nsu, adaba maka ipigide mmezi na mgbanwe nke jụrụ mmanụ, isi moto belt bụ rụrụ na mfe ịgbanwe, na-adaba adaba maka ụdi mmezi. Ọ dị nchebe ma na-adaba adaba.
Ndị ọzọ pịa
Ndị ọzọ pịa:Enweghị mmezi n'elu ikpo okwu. Ndochi mmechi, nnọchi nke mmanụ jụrụ, ngbanwe nke eriri igwe, wdg.nke nwere ike mezue ya na enyemaka nke forklift, nke na-adighi adaba maka mmezi na mmezi. Enwere ụfọdụ ihe ọghọm dị na nchekwa.
Daya pịa: Daya pịa jiri ụzọ anọ na akụkụ asatọ gbaa ụgbọ okporo ígwè ahụ ụzọ. N'ebe a na-eme stampụ, a na-etinye okporo ụzọ slide ntuziaka site na ọdụ ụgbọ mmiri na-eduzi na tebụl ahụ. Raildị okporo ụzọ a nwere njirimara nke izi ezi dị elu, ikike mgbochi eccentric ibu, obere ụgbọ okporo ígwè na ogologo oge njide.
Ndị ọzọ pịa:ndu okporo ígwè na ọkara nchọ Ọdịdị dị ka e gosiri na nri ọgụgụ na-adiaha. N'ime usoro stampụ, enwere ngalaba okporo ụzọ ekpughere. N'oge zọ usoro, slide ndu okporo ígwè dị mfe tilt, na ogbenye mgbochi echiche ọjọọ ibu ikike, nnukwu okporo ígwè eyi, obere nkenke njigide oge na elu mmezi na-eri.
Daya pịa: ọdịiche dị n'agbata isi ihe abụọ nke ike itinye ihe karịrị 60%; Uru: oke nke dị n'etiti isi ihe nrụpụta abụọ, nke ka ukwuu ibu ikike eccentric; nke bu oke uzo di n’etiti uzo oru abuo, nke ka elu onu ahia.
Ndị ọzọ pịa:Ebe dị anya n’etiti isi ihe abụọ na-erughị 50%; Ọghọm: obere pere mpe dị n'etiti isi ihe eji arụ ọrụ ike, obere ikike ikike eccentric. Uzo ndu di mfe ihilata, uzo ndu di mfe iyi, nkenke uzo uzo di nma.
Daya pịa: amanye mkpa mmanụ mgbasa usoro, ike ịzọpụta, nwere ike recycled, ofufe thermal arụmọrụ dị mma, jiri ya tụnyere griiz lubric nwere ike mụbara site 5-10 gbagwojuru kwa nkeji.
Ndị ọzọ pịa: electric griiz mgbapụta, griiz ike-reused, ọ dịghị uru nke amanye mkpa mmanụ mgbasa usoro.
Daya pịa: mgbe ọrịa strok ogologo bụ otu, na-amanye mkpa mmanụ mgbasa usoro nwere elu arụmọrụ, jiri ya tụnyere griiz lubrication, ọ nwere ike dịkwuo 5-10 gbagwojuru kwa nkeji. Sọsọ soro Japanese JIS larịị 1 ọkọlọtọ; ụkpụrụ Japanese JIS larịị 1 dị elu karịa ọkọlọtọ Taiwan CNS ọkwa 1.
Ndị ọzọ pịa:electric griiz mgbapụta, griiz ike-reused, ọ dịghị amanye mmanụ mgbasa usoro uru. dị ka Taiwan CNS larịị 1 ọkọlọtọ
Ntuzi slide nke Daya Punch press
ndị ọzọ slide eduzi nke ntụmadị
Nduzi nduzi nke Daya punch press
1.High ugboro quenching usoro: ekweghị ekwe n'elu hrc48;
2. Igba egweri usoro nke ndu okporo ígwè: elu imecha nwere ike iru ra0.4-ra0.8 (mirror), flatness, parallelism na verticality n'ime 0.005mm / ㎡.
3. Igwe akụrụngwa nwere uru nke obere ejiji, nkenke dị elu, ogologo oge mmezi oge, ndụ ogologo ndụ na obere ume ike.
Ndị ọzọ pịa ndu okporo ígwèenweghị usoro quenching; -egwe ọka nhazi, elu roughness ra1.6-ra3.2, flatness, parallelism, perpendicularity karịa 0.3mm / ㎡
Daya pịa crankshaft
ọzọ pịa crankshafts
Daya punch pịa: a na-eji crankshaft mee nnukwu alloy 42CrMo Uru: ike dị 1.3 okpukpu karịa nke ígwè nchara 45, ndụ ọrụ dị ogologo, nkwụsi ike dị mma, ejiji dị obere, na nkenke na-echekwa ogologo oge.
Ndị ọzọ na-ebi akwụkwọ: mee nke ígwè ígwè, ụkọ ihe ụfọdụ: ụgwọ dị ala ， ike na eyi nkwụsi ike adịghị ka 42CrMo
Oilzọ mmanụ nke DAYA punch Press: Φ 8 na-eji mmanu mmanu mmanu piping.
Uru: pipeline dị ogologo, nnukwu dayameta adịghị mfe igbochi, agbaji, hụ na nchekwa nke mmanụ na-ete mmanụ, dị nro.
Ndị ọzọ na-ebi akwụkwọ: mmanụ mgbali mmanu piping nke pịa adopts Φ 6.
Nke gara aga: Toggle Joint High Speed ​​Press (Usoro ngwa ngwa)
Osote: STX usoro C Frame Single Crank Mechanical Press
STC Series C type “Mepee Ugboro abụọ Point Cran ...